Me: The Lost Short Stories Part (1) – Thiha Kyaw – Medium
Studying Web Development and Management. 20
Me: The Lost Short Stories Part (1)
Dream ဆိုင်ကယ် Part (1)
တံခါးခေါက်ရင်လက်စစ်ကြီးနဲ့ခေါက်တာဘယ်လိုမုန်းမှန်းမသိ။တံခါးခေါက်လိုက်တော့ဒီအထဲကအသံအကျယ်ကြီးမြည်တော့လန့်လန့်သွားတယ်။ကိုယ်တွေဆိုကိုယ်ချင်းစာလို့တံခါးမခေါက်ဘဲဘုသီးဘဲလှည့်တယ်။အမေဆိုတံခါးကိုလက်စစ်ကြီးနဲ့ခေါက်တယ်။အကျယ်ကြီးဘဲ။ကိုယ်တွေကသီချင်းအေးအေးလေးဖွင့်ပြီးနားနေတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့ဒေါက်…ဒေါက်…ဒေါက်ဆိုတာကြီးကအရမ်းနေရခက်တယ်။မနေ့ကလည်းအလုပ်သမားတွေသော့လာတောင်းတာတံခါးကိုဒေါက်…ဒေါက်…ဒေါက်…လာခေါက်တယ်။Game of Thrones ကြည့်နေတုန်းကြီးဇိမ်ပျက်တာပေါ့။Season finalကိုဇိမ်လေးနဲ့နားပြီးကြည့်နေတာကိုလာခေါက်တယ်။ထားလိုက်ပါတော့။နောက်တစ်ခုကြောင့်ပိုပြီးဇိမ်ပျက်သွားတယ်။ Jon Snow ကDaenerysအခန်းတံခါးကိုလက်စစ်ကြီးနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်(၃)ချက်ခေါက်လိုက်တာကြောင့်တော်တော်နေရခက်သွားတယ်။ကိုယ်တွေထင်တာအလိုက်မသိတဲ့လူတွေဘဲတံခါးကိုအဲ့လိုခေါက်တယ်ထင်တာ Jon Snowလိုအလိုက်သိတဲ့ကောင်တောင်အဲ့လိုခေါက်တော့ ကိုယ့်တံခါးဘုလှည့်သံပေးပြီးလူရောက်ကြောင်းအသိပေးတာအရူးလိုလိုခံစားလိုက်ရတယ်။
Never missastory from Thiha Kyaw, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Thiha Kyaw